Ịchọ mma ụkwụ nke akwa akwa - Kedu ngwá ụlọ m nwere ike itinye? | Bezzia
Kedu ka m ga-esi chọọ ụkwụ nke akwa akwa mma
Susana godoy | 06/01/2022 14:00 | Ngwongwo
Icho mma ụkwụ nke akwa akwa Ọ bụ nnukwu nhọrọ ọzọ anyị ga-eburu n'uche. N'ihi na ọ bụ ezie na ngwá ụlọ na nkọwa niile dị irè, mgbe ụfọdụ anyị nwere ike ichefu ebe pụrụ iche nke nwere ike inyere anyị aka nke ukwuu ịhazi ụlọ anyị.
Enwere ọtụtụ echiche anyị ga-eburu n'uche, ebe ọ bụ na Ha ga na-adabere na mmasị gị ma ọ bụ ụdị nke ime ụlọ gị. Dị ka ọ nwere ike, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ ihe ịchọ mma mbụ, nke na-enye gị ohere ịchekwa, mgbe ahụ echefula ihe na-esote.
1 Jiri ogwe osisi chọọ bọọdụ ụkwụ mma
2 Tinye sofa
3 Ụlọ ahịa akwụkwọ dị n'akụkụ akwa
4 Họrọ ụlọ akụ
5 Nzọ na stool abụọ
Jiri ogwe osisi chọọ bọọdụ ụkwụ mma
Ọ bụ otu n'ime echiche mbụ na-abata n'uche mgbe anyị na-eche maka ichota bọọdụ ụkwụ. Eziokwu bụ na ekele maka nke a, anyị ga-ekwu na ọdịdị ya agbanweela nke ukwuu. Ọ bụ ezie na ka Enwere ụdị vintage ọzọ maka mpaghara ime ụlọ a, ị nwekwara ike ịhọrọ mmecha ndị ọzọ nwere ụdị akụkụ anọ. na ụdị minimalist na wicker ma ọ bụ na ụda beige, dịka ọmụmaatụ. Ihe ọ bụla ọ bụ, ihe anyị doro anya bụ na ha na-enyere anyị aka na nchekwa na n'ime ya anyị nwere ike ịchekwa ihe niile site na mpempe akwụkwọ na pajamas ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Dị ka anyị maara nke ọma, ụdị sofa kachasị dị iche iche. Ya mere, n'ezie na e nwere otu nke ga-adị mma maka ebe a nke ime ụlọ. Maka mpaghara a ị nwere ike ịhọrọ nke nwere azụ azụ, nke na-adịghị oke elu na oche abụọ. Ọ bụ ezie na ndị ahụ bụ ụdị divan na-ahụkwa nke ukwuu. Ebe ọ bụ na ha dị warara ma zuru oke iji chọọ bọọdụ ụkwụ na-enweghị fanye ya kacha nta.
Ụlọ ahịa akwụkwọ dị n'akụkụ akwa
N'otu aka ahụ ị nwekwara ike họrọ arịa ụlọ akụkụ anọ na-adịchaghị ogologo. Taa ekele maka ngwá ụlọ ndị a modular, anyị ga-ahụ ha n'enweghị nsogbu. Ọ bụ nhọrọ zuru oke ka ị nwee ike ịhazi akwụkwọ gị niile nke ọma. Ya mere, n'abalị ebe ị na-enweghị ike ihi ụra, ọ dịghị ewute gị ikwe ka otu n'ime ihe omume ndị ahụ ebipụtara buru gị. Ọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji mee ka echiche gị na-agba ọsọ. Ugbu a, naanị ị ga-ahọrọ arịa ụlọ nke nwere shelves na n'ime ha, na mgbakwunye na akwụkwọ ndị ahụ, ị ​​nwere ike itinye nkọwa ụfọdụ ihe ịchọ mma mgbe niile n'ụdị igbe iji nọgide na-echekwa obere ngwa gị.
Họrọ ụlọ akụ
Ee, ọ bụkwa ihe ọzọ n'ime nhọrọ ndị ahụ na-enweghị ike ịhapụ n'ihi na n'enweghị obi abụọ ọ bụla, anyị ga-ahụ ya na ọtụtụ ihe ịchọ mma dị iche iche. Ị nwere ike ịga maka a mfe bench, rustic imecha ebe osisi na-abụkarị isi. Mana ebe anyị na-ekwu na enwere nhọrọ, ị ga-ahụ ọtụtụ ụzọ ọzọ ị ga-ahụ n'anya. N'ihi na ị nwekwara ike iji ya dị ka oche, iji nwee ike itinye akpụkpọ ụkwụ, dịka ọmụmaatụ. Ma ọ bụ n'okpuru ya, tinye ụfọdụ nkata ma ọ bụ igbe na-aga n'ihu na nzọ na nchekwa nke na-amasị anyị nke ukwuu.
Nzọ na stool abụọ
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na anyị na-ekwukarị echiche nke otu ngwá ụlọ zuru ezu, ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị otú ahụ. Ebe ọ bụ na anyị nwekwara ike ime ihe ịchọ mma nke aka stool abụọ, ọmụmaatụ. Ya mere, anyị nwere ike idowe ha na njedebe ọ bụla nke akwa ma ọ bụghị n'etiti etiti. Mana naanị gị nwere okwu ikpeazụ! Tụkwasị na nke ahụ, stool nwere ike inwe akụkụ dị elu nke dị mma, ebe ọ bụ na ha nwere ike ịbụ oche dị mfe ma ọ bụ mechie n'ụdị ihe nrịbama dị mma. Dị ka ị hụla, nhọrọ dịgasị iche iche nke na onye ọ bụla n'ime anyị ga-achọta nke kachasị mma maka ihe ịchọ mma anyị. Kedu ihe ga-akacha mma icho mma ụkwụ nke akwa akwa?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Ngwongwo » Kedu ka m ga-esi chọọ ụkwụ nke akwa akwa mma
Otu esi ezere iwetu ọrụ
ịse foto ọ na-amasị gị? Nwee anụrị ihe ngosi 6 ndị a